အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူလေ့လာမှုကို ရပ်သင့်သလား ~ The ICT.com.mm Blog
အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူလေ့လာမှုကို ရပ်သင့်သလား
လူတိုင်း အရွယ်ရောက်လာရင် အလုပ်လုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘာအပိုင်းကို တာ၀န်ယူ လုပ်ဆောင်ရမှာလဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ။ တချို့ကျပြန်တော့ တဖြည်းဖြည်း အသက်သာ ကြီးလာတာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ သင်တန်းတွေပဲ တက်နေသူများ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ မည်သူမဆို လိုအပ်ချက်တွေ ကတော့ အနည်းအများ ရှိနေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရင်းဖြင့် သင်ယူသွားရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားမှုကိုလည်း သင်ယူလေ့လာနေခြင်းကနေ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတချို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကျပြန်တော့ အလုပ်တစ်ခုရရှိပြီဆိုရင် သင်ယူလေ့လာဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ တွေးထင်ကောင်း တွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။ သင်လည်း ဒီလိုအယူအဆ ခေါင်းထဲ၀င်လာရင်တော့ အမြန် နှင်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ သင်က လက်ရှိအနေအထားမှာ ရပ်တန့် မနေချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ အမြဲသင်ယူပါ။ လေ့လာပါ။ စူးစမ်းပါ။ သင်ယူရုံနဲ့ မပြီးပြည့်စုံပဲ ဗဟုသုတပါ ရှာမှီးထားသင့်ပါတယ်။
သင့််ရဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံလေ့လာခြင်းဖြစ်စေ၊ နောက်ထပ် နယ်ပယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ အမြဲသင်ယူနေဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ အမှန်အားဖြင့် အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အချိန်အနည်းငယ်ပေးနိုင်မှသာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်အတွင်း သင်ယူမှုနှင့် အလုပ်ခွင်ပြင်ပ သင်တန်းများတက်ခြင်းဖြင့်လည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပသင်တန်းတက်ဖို့ဆိုတာ အလုပ်လုပ်နေသူ တစ်ဦးအတွက်တော့ အတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်းက အချိန်မရှိဘူးလို့ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ သင်လည်း မသုံးမိဖို့တော့ သတိပေးပါရစေ။ အရင်ဆုံး သင့်ကိုယ်သင် တွေးလိုက်ပါ။ ငါဒီနေရာမှာဘဲ ရပ်တန့် နေမှာလား။ ဆက်လက်ကြိုးစား သင်ယူမလားဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုကို အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်းတွေက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးဆိုတဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ ရရှိနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါမှသာ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရေရှည်တည်မြဲပြီး ပိုမိုတိုးတက်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ အလုပ်မရှိသူထက် သင်ရဲ့ ကြိုးစားမှုက နှစ်ဆ ပိုမိုကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ ထပ်မံသင်ယူလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုက အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ သင်ယူမှုဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ပိုပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
သင်ယူမှုပုံစံက လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ သင်ယူလေ့လာမှု ပုံစံတွေ အများအားဖြင့် မတူကြတာများပါတယ်။ မိမိတို့အတွက် အဆင်ပြေစေပြီး သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် အများအားဖြင့် သင်တန်းတွေ ပြင်ပမှာ တက်ချင်ကြပေမယ့် အလုပ်ရှင်က ပေးမတက်တာတို့ ဘာတို့ ရှိတတ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် ရုံးချိန်ပြင်ပတို့၊ အလုပ်မသွားခင်တက်လို့ရတဲ့ သင်တန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ပြန်ချိန်မှ တက်ရတဲ့ သင်တန်းတွေလည်း မိမိရဲ့ နေမှုထိုင်မှု နောက် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို အရင်လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဘယ်အချိန်ဆိုရင် ပိုသင့်တော်လည်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အလုပ်ပဲ လုပ်နေပြီး သင်ယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ လူတစ်ဦးရဲ့ အသိဉာဏ်စွမ်းအားသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ် သွားပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ခွင်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ သင်ကြားခြင်းလည်း မရှိ လူထုနဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း လည်း မရှိဖြစ်လာတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်မှုလည်း မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ပါ။ နောက်ပိုင်း အလုပ်ခွင်အတွင်း ပျော်ရွှင်မှု မရှိခြင်း၊ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းစေခြင်းနှင့် ပင်ပန်းမှုတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းမှု ကိုပါ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်နှင့် ပြင်ပသင်တန်း အချိန်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်မတူဘဲ စာလေ့လာခြင်းအတွက် သီးသန့်နေရာ တစ်ခု သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အလုပ်တာ၀န်တွေနှင့် ခွဲခြားထားပါ။ အလုပ်တာ၀န်တွေက စိတ်ဖိစီးမှု အနည်းငယ်ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ခွဲခြားပြီး လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့် စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေပြီး မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက် အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပသင်တန်းတွေ တက်ခြင်းဖြင့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ဗဟုသုတများ ရရှိမှုများအပြင် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်း ပိုမိုတိုးပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ သင် အခက်အခဲဖြစ်ချိန်မှာလည်း သင့်အတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အလုပ်ခွင်နှင့်ပတ်သက်လာတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးနှင့် ဖန်တီးခြင်းတွေကို ဦးစားပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ လေ့လာသင်ယူခြင်းထက် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့်အတူ လေ့လာသင်ယူခြင်းက ပိုမိုပြီး ထိရောက်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အလုပ်ခွင်ရဲ့ လိုအပ်ချက် သင်တန်းတစ်ခုခုကို သင် ယခုကစပြီး တွေဝေမနေဘဲ အမြန်တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းခွင် အခက်အခဲများကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းလည်း သည်းခံပြီး တက်ရောက်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ မောပန်းမှုတွေ၊ ကြိုးစားရုန်းကန်မှုတွေ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အလုပ််အကိုင်နှင့် ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအတွက်ကော အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာများနှင့် အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းများကို သင် ရရှိခံစား ပိုင်ဆိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ရှင်။
Newer ဆီးဂိမ်းတွင် ရွေတံဆိပ် ၇၀ကျော် ရရန်ဗီယက်နမ်မျှော်မှန်း
Older Advanced Wireless Networking Courseသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
2 thoughts on “အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူလေ့လာမှုကို ရပ်သင့်သလား”
Tin Tun says:
No.Learning is never end.
Right Ko Tin Tun. I think Learning and Teaching every day to every time.